I-Corente Appart Ocean View #360° - I-Airbnb
I-Corente Appart Ocean View #360°
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguCorente
I-COVID19 : emva kokubhukisha ngakunye sikunika into yokubulala iintsholongwane epheleleyo (ukubanjwa kwesitshixo ngebhokisi enesitshixo).
Le yenye yezona flethi okanye izindlu ezikwicomplex ezintle-indawo yokuhlala e-Essaouira : YONKE IMIGANGATHO ephezulu kunye neethayile ZAYO - yesona sakhiwo siphakamileyo kwisithili saseMéchouar (indlu eyakhiwe ngo-1835) le ndawo i-140mwagen "loft" ngoku iyafumaneka kubahambi abanelungelo abaza kuyibhukisha.
Ithala elinefenitshala epheleleyo kunye ne-360 ° panoramic view!
Ngeli xesha: "I-Corente" yinkampani echaziweyo! Xhasa ishishini lokubuka iindwendwe
"I-Corente" yinkampani echaziweyo! Ukuxhasa iingcali zokubuka iindwendwe, wonga imisebenzi yaseMorocco. Abantu abayi-5 basebenza ukuze baqinisekise umgangatho wokubuka iindwendwe kwizindlu "zeCorente"
Iflethi okanye indlu ekwicomplex - iVilla Corente - iRiad Tamayourt Ocean View
Iflethi ineloft eyi-140m evulekileyo kwiveranda engaphakathi/ibhalkoni ejonge isitalato sabantu abahamba ngeenyawo esivula i-medina kwiindwendwe.
Amatye aphezulu afikeleleka ukusuka kwigumbi lokuhlala anikezela ngeembono ezingama-360-degree zoLwandle kunye neMedina.
Uza kuba namagumbi okulala ayi-3 (elinye : ukujonga ulwandle/ulwandle lwase-Essaouira) kunye namanzi awo amdaka - iishawa zokuhamba.
Igumbi lokuhlala elikhulu eliyi-1 (m 40), i-bay window facade.
Ikhitshi elinento yonke elijongene nolwandle.
Le flethi ixhamla kwimihombiso ehlaziyiweyo apho amagama amakhulu ehonjiswe ngendlela yale mihla (njenge-Ingo Mauritaniaer), ezona zinto zintle zobugcisa zaseMorocco, okanye i- "china" yasekuhlaleni (ifenitshala yakudala okanye eyi-70s) ecaleni kwayo!
Umtsalane: le flethi okanye indlu ekwicomplex enomtsalane nenomtsalane ephakamileyo ephakamileyo eyi-19 m inengxaki (nobukhulu) ekufuneka waziswe kwaye uyazi: ikumgangatho wesithathu ongenamanyathelo ayi-64! yenziwe...kodwa kucetyiswa ukuba ungalibali isonka esisezantsi! (ayifumaneki ngokupheleleyo kubantu abakhubazekileyo, kunye nazo zonke izinto esizixolisayo)
4.86 · Izimvo eziyi-133
Indawo endala, ekhuselekileyo neyaziwayo yaseMéchouar (indawo yabahamba ngeenyawo)
- isango leBab Sbaa medina: 50 m
- Isikhululo seTaxi Bab Sbaa: 50 m
- ukufika kwee-shuttles nokudluliselwa: 50 m
Isikwere, umbindi wesixeko, ii-souks... kufutshane
Iivenkile zokutyela neehotele ezininzi ezikufutshane
I-Dar Souirie Foundation (imisitho) : esitratweni !
Qaphela : siyixela kakuhle i-hammam massage Spa cocooning kwisakhiwo sethu!
Umbuki zindwendwe ngu- Corente
Je suis français, originaire d'Annecy en Haute-Savoie.
Je vis au Maroc depuis 2003, et à Essaouira depuis 2009.
J'aime voyager et faire de nouvelles rencontres.
Je suis passionné de déco et d'architecture
Siyakwamkela ukuba unikezele ngezitshixo kunye nendlu
- ukutya okanye abanye : kwisicelo (kodwa kungekhona ehlotyeni, akukho matheko okanye iiholide zesikolo)
- umbutho wesidlo sasemini emaphandleni eTamayourt Riad, indlu engasemva I-Ocean View enendawo yokuqubha enamanzi ashushu. UKUFIKELELA kwi-200 dh / umntu okhupha ikuphoni ye-200 dh kwi-invoyisi yokugqibela
- Ukuthunyelwa, iteksi, ukuqesha imoto: kwisicelo kunye namaqabane ethu - iiteksi zasedolophini/ udlulisele ezinye izixeko kunye Nezinto Ezinokonwatyelwa
- umbutho w…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$534